Posted by ကို Tranquillus | ဇွန်လ 5, 2018 | တိုက်ရိုက်လွှင့်ခြင်းနှင့်ပြင်သစ်တွင်အလုပ်မလုပ်
တစ်ခုချင်းစီကိုနိုင်ငံကယင်း၏အလုပ်အကိုင်ဥပဒေများရှိပြီး, ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ကွဲပြားခြားနားအခြေအနေများတွင်မိမိတို့အအားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုရှိသည်။ ပြင်သစ်၏အားသာချက်ကဘာတွေလဲ? အဘယ်ကြောင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံလုပ်ကိုင်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ပါသလဲ
ပြင်သစ်အလုပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်အဘယ်မှာရှိဥရောပတစ်တိုင်းပြည်များနှင့်များစွာသောဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အများအပြားစိတျထဲတှငျထုတ်ပေးအိပ်မက်အပြင်ဘက်တွင် နိုင်ငံခြားနိုင်ငံသားများဒါဟာအထူးသဖြင့်ဝန်ထမ်းများအတွက်အရေးကြီးသောကာကွယ်မှုများပူဇော်လေ့တစ်ခုစီးပွားရေးအရအားကောင်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါပြင်သစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကုမ္ပဏီများနှင့်ကျော်ကြားဌာနရှိပါတယ်။ ထိုလုလင်သည်နိုင်ငံခြားဘွဲ့ရနယ်မြေအပေါ်အထူးသဖြင့်ကြိုဆိုကြသည်။ အလုပ်ရှင်များကိုကောင်းစွာသတိပြုမိကြသည်အဖြစ်၎င်းတို့၏အသိပညာ, ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ရူပါရုံကိုမွငျ့မားကဆက်ပြောသည်တန်ဖိုးနှင့်အစိုးရဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်လာရန်လွယ်ကူမယ့်အဘယ်ကြောင့်ဖွင့် ပြင်သစ်မှရွှေ့ နှင့်အလုပ်။
ပြင်သစ်တွင်, အလုပျသမားသုံးဆယ်ငါးနှစ်ရှိသော်နာရီတစ်ပတ်၏စာချုပ်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ ဒီအမျိုးစုံအလုပ်အကိုင်များမပါဘဲသူမ၏ဘဝကိုကယ်တင်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီလအဆုံးမှနိမ့်ဆုံးဝင်ငွေအာမခံပါသည်။ ထို့အပွငျကသူတို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဝအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်ဆန္ဒရှိသောသူတို့အဘို့အတော်လေးဖြစ်နိုင်သောမျိုးစုံအလုပ်အကိုင်များဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ကလုံခြုံရေးပူဇော်မအားလုံးမှာနိုင်ငံပေါင်း။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ပြင်သစ် SMIC လို့ခေါ်တဲ့နိမ့်ဆုံးလုပ်အားခမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ဒါကအနည်းဆုံးအလုပ်ချိန်နာရီနှုန်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ မည်သို့ပင် 151 နာရီလစဉ်အလုပ်အတွက်ကျင်းပခဲ့သောအနေအထား, န်ထမ်းတစ်ဦးလစာလက်ခံရရှိရန်ရရှိနိုင်မည်နေကြသည်။ အလုပ်ရှင်များကိုအနိမ့်အတွက်အလုပ်ချိန်နာရီနှုန်းကိုပေးဆောင်ပူဇော်ခွင့်ပြုမထားပေ။
ဖတ်ရန် ကျောင်းများပိတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအလုပ်ရပ်တန့်ခြင်းမှမည်သူအကျိုးရရှိနိုင်သနည်း။ အကယ်၍ သင်သည်၎င်းကိုခံစားခွင့်ရှိပါကလျော်ကြေးပမာဏနှင့်ပမာဏကားအဘယ်နည်း။
တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်လရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးအလုပ်လုပ်ခဲ့တစ်နှစ်လျှင်ငါးပတ်တည်းဟူသောပေးဆောင်ခွင့်နှစ်ခုနှင့်တစ်နှစ်ခွဲရက်ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအလုပျသမားမြားအတှကျအကြိုးတစ်မရေအပေါင်းတို့နှင့်တကွဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပွငျသုံးဆယ်ကိုးအပတ်စဉ်နာရီအလုပ်လုပ်န်ထမ်းလည်း RTT ပေါင်းစပ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာတည်းဟူသောနှစ်စဉ်ပေးဆောင်အားလပ်ရက်ဆယ်ရက်သတ္တပတ်တစ်ဦးစုစုပေါင်းရ။
အစဉျအမွဲကာလများအတွက်စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသူတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေကြသည်။ အလုပ်ရှင်များကိုအမြဲတမ်းစာချုပ်များအပေါ်န်ထမ်းပယ်ချရန်အဘို့အအမှန်စင်စစ်ကြောင့်ခက်ခဲသည်။ ပြင်သစ်တွင်, အလုပ်သမားဥပဒန်ထမ်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ထို့အပွငျထုတ်ပယ်၏အမှု၌, ဝန်ထမ်းရပ်စဲ၏နေ့စွဲကိုအောက်ပါသုံးခုနှစ်တာကာလအတွင်းတခါတရံမှာအနည်းဆုံးလေးလလောက်အလုပ်လက်မဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ကိုရရှိနှင့်။ ဒါဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ယခင်အလုပ်အကိုင်အများ၏ကြာချိန်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟာပြင်သစ်တွင်အလုပ်ရှာတွေ့ဖို့အဆင်ပြေအချိန်ကာကွယ်ပေးသည်နှင့်ပေးပါသည်။
ပြင်သစ်သည်စီးပွားရေးအရအားကောင်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပြီးကမ္ဘာ့စီးပွားရေးတွင်အဓိကနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြင်သစ်အသိပညာကိုယုံကြည်ရန်တွန့်ဆုတ်နေသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများရှေ့တွင်နိုင်ငံသည်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်မှု၏ ၆% နှင့်ကမ္ဘာ့ဂျီဒီပီ၏ ၅% ကိုရရှိသည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆင့်တွင်တိုင်းပြည်ဇိမ်ခံစက်မှုလုပ်ငန်းဦးခေါင်း၌ဖြစ်ပြီး, လက်လီနှင့်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ဒုတိယအနေအထား။ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ပြင်သစ်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်တတိယအဆင့်။ တိုင်းပြည်အလွန်ကောင်းစွာဦးဆောင်စက်မှုလုပ်ငန်းများကုမ္ပဏီအတွက်ထောက်ပံ့နေသည်။ အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီများသည်ကမ္ဘာ့အ 39 ကြားတွင် 500 ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီများသည်ဖြစ်ကြသည်။
က " ပြင်သစ်တွင်လုပ် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ၎င်း၏စစ်မှန်သောတန်ဖိုးဖြင့်တန်ဖိုးထားသောအရည်အသွေးအာမခံချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြင်သစ်တွင်အလုပ်လုပ်သောလက်မှုပညာသည်များသည်အလွန်အသိစိတ်ရှိပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအမြဲပေးသည်။ စုစုပေါင်းလက်မှုလုပ်ငန်း ၉၂၀,၀၀၀ ရှိသည်။ ထို့နောက်ပြင်သစ်၌အလုပ်လုပ်ခြင်းသည်သင့်အားကမ္ဘာအနှံ့အသိအမှတ်ပြုထားသောအဆင့်မြင့်အလုပ်နည်းစနစ်များကိုသင်ယူရန်နှင့်အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည်။
ပြင်သစ်ကြီးမားသည့်ကုမ္ပဏီများကသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များသဘောပေါက်ဘို့မိမိတို့ယုံကြည်ကိုးစားရာနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ကုန်သွယ်ရေးများသောအားဖြင့်မီးမောင်းထိုးပြနေကြသည်နှင့်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များဒေသအလိုက်လုပ်ထုတ်ကုန်များ၏ပရိတ်သတ်တွေရှိပါတယ်။ ပြင်သစ်ကျွမ်းကျင်မှုကနေအကျိုးကျေးဇူးနိုင်ငံခြားနိုင်ငံသားများအတှေ့အကွုံရဖို့ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
နိုင်ငံခြားသားများတစ်ဦးကြိုးအလုပ်ရှာဖွေတာ၏မြော်လင့်ခြင်းအတွက်ပြင်သစ်တွင်လေ့လာရန်အဘို့အဒါဟာအဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အမှန်မှာထိုပြင်သစ်အဆင့်မြင့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများအရည်အသွေးမြင့်၏ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ဟာမကြာခဏလေ့လာမှုသင်တန်း၏အဆုံးမှာရှာသောအခါအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ထိုမှတပါး, တစ်ခါတစ်ရံပေးဖို့ပြင်သစ်တွင်နေထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်လာမယ့် nationals သူတို့သားသမီး ကျောင်းပညာရေးနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမှအခွင့်ထူးခံ access ကို။ လုံခြုံရေးပုံစံရှာဖွေတာအပြင်, သူတို့သားသမီးသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုများ၏အလုပ်အကိုင်ရိုက်ထည့်ရန်အဘို့အစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအခွင့်အလမ်းကိုဆက်ကပ်။
ပြင်သစ်အသက်တာ၏အရည်အသွေးကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌ထိပ်တန်းနိုင်ငံများကြားတွင်ရပ်တည်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါနှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုဆွဲဆောင်ထို့ကြောင့်အငြိမ့်အသက်ရှင်ဖို့အခွင့်အလမ်း။ ပြင်သစ်တွင်နေထိုင်တ access ကိုပေးသည် ကနျြးမာရေးစနစ်များကို ကမ်ဘာပျေါမှာအကောင်းဆုံး။ WHO ကအများအပြားအခါသမယအပေါ်ရှေ့တန်းမှအတွက်ပြင်သစ်အဆင့်သိရသည်။ နိုင်ငံခြားရေးကျောင်းသားများအတွက်လည်းပြင်သစ်၏လူမှုရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုခံစားပါ။
ထို့အပြင်ပြင်သစ်ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးဘဝမျှော်လင့်ထားတစျခုရှိပါတယျ။ ဒါဟာအကြီးအကျယ်စောင့်ရှောက်မှုရဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အတော်များများကနိုင်ငံခြားသားတွေလာရန်ရွေးချယ် ပြင်သစ်မှရွှေ့ ဘဝ၏ဤအရည်အသွေးကိုထံမှအကျိုးခံစားရဖို့။
ပြင်သစ်လောက၏အသိချင်စိတ်ကိုဆွဲဆောင်တဲ့အလွန်ကြွယ်ဝသောယဉ်ကျေးမှုရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်နိုင်ငံခြားနိုင်ငံသားများ, တိုင်းပြည်များ၏တိကျသောစိမ်ဘာသာစကားကိုလေ့လာသင်ယူနှင့်အသစ်အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ပြင်သစ်တွင်နေထိုင်ပြီးအလုပ်လာမယ့်ကြောင်းတွေ့ကြုံတတ်၏။ ကမ်ဘာပျေါတှငျ, ပြင်သစ်သည်၎င်း၏လူနေမှုပုံစံစတဲ့များအတွက်အလွန်ကောင်းသောဂုဏ်သတင်းရှိပါတယ်။
နိုင်ငံခြားသားများအများအားဖြင့်ယင်း၏ဓါတ်ရောင်ခြည်၎င်း၏စီးပွားရေးခွန်အားနှင့်န်ထမ်းများ၏ကာကွယ်မှုများအတွက်ပြင်သစ်ကိုရွေးချယ်ပါ။ သုံးဆယ်ငါးနာရီနှင့် paid ခွင့်ပြင်သစ်လုပ်သားများဝယ်ယူကြပြီခွင့်ထူးဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်နိုင်ငံအားလုံးန်ထမ်းမှသူတို့ကိုပူဇော်ကြပါဘူး။ ပြင်သစ်မှရွေ့လျားလာသောအခါနိုင်ငံခြားရေးနိုင်ငံသားများယေဘုယျအားဖြင့်အသက်နှင့်အလုပ်လုံခြုံရေး၏အရည်အသွေးရှာအံ့သောငှါနေကြသည်။
အဘယ်ကြောင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံနေထိုင်ပြီးအလုပ်? မေလ 14th, 2020Tranquillus
အောက်ပါသင့်ရဲ့ Workspace ကိုစုစည်းဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?